China Venturi Mask-2 အရောင်စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Bornsun
4. အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုသည် ၂၄% မှ ၅၀% အထိရှိသည်
၆.၁၀၀% ရာဘာစေး၊ DEHP အခမဲ့ရွေးချယ်မှုအတွက်ရရှိနိုင်သည်။
လိုအပ်လျှင် EO ဓာတ်ငွေ့ဖြင့် 7.Sterilized ။
1.Material: ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့် PVC
2. ပိုးသတ်: EO ဓာတ်ငွေ့
၃။ ထုပ်ပိုးခြင်း ၁ ပုဒ် / တစ် ဦး ချင်းစီအိတ်၊ ၁၀၀ pcs / ctn
4. အရည်အသွေးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: အီး, ISO 13485
၅ ။ <၂၅ ရက်
6.Port: ရှန်ဟိုင်းသို့မဟုတ် Ningbo
7.Color: Transperant သို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်
8. နမူနာ: အခမဲ့
ရှေ့သို့ Venturi မျက်နှာဖုံး